Soo saaraha sariirta
Guri yar wuxuu u eg yahay inuu yahay qaab cusub oo casri ah oo qaab nololeed casri ah oo loogu talagalay kirooyinkaan gaaban. In kasta oo ay jirto meel yar, waddo cidhiidhi ah, iyo qolal yaryar, weli waxaa jira habab dhawr ah oo u muuqda mid ifaya, ka weyn, kana qurux badan. Sababtoo ah xaddidaad ballaaran, waa in aan alaabta guriga si fiican isugu qasnaa naqshadda gudaha, ku…
Waa maxay sariirta aan inta badan ku iibsano qolka fadhiga? Jawaabtu gabi ahaanba waa dhar, harag, ama kuwa kale, kaas oo ah doorashada hore ee qoysaska badankooda. Laakiin miyaad maqashay sofasyada la buufin karo? Haa, Waxay u egtahay wax yar oo la yaab leh oo aan dadka badankiisu aqoon. Sariirta la buufin karo waxay ka kooban tahay PVC, iyo cadaadis si aad gaaska ugu shubto jirka.…
Waxaa jira noocyo badan oo kursi oo kala duwan oo ay adag tahay in la xusho haddii aad u guurto guri cusub ama aad beddesho kii hore. Laakiin waxaan aaminsanahay inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan ee lagu doorto kumanaan gogo '. Taasi waa sababta aan u go'aansaday inaan qoro maqaalkan. Hal shay oo aan jecelahay waa inaan ku dhex wareego alaabta guriga ...
Guudmarka Qurxinta jilicsan ee hudheelka waa nafta hudheelka oo dhan. Naqshadeynta wanaagsan ee qurxinta jilicsan ayaa door ka ciyaari karta kor u qaadista saameynta illaa xad. Soo -saaraha caadadda ee fadhiga hudheelka Baotian Furniture ayaa kuu sheegaya naqshadda qurxinta hudheelka, Ku habboonaanta alaabta jilicsan. Midda koowaad waa xulashada alaabta hoteelka…
Istaraatiijiyad iibsiga hudheelka fadhiga hudheelka
Waa inaan joognay huteel bannaanka yaal. Ma dareensannahay in fadhiga uu ka duwan yahay fadhiga gurigeena? Haddii aad rabto inaad iibsato fadhiga hoteelka, sidee u dooran kartaa? Qaar ka mid ah shabakadaha internetka ayaa weydiiyey su'aalaha noocaas ah. Sofasyada hoteelku waa alaab aan caadi ahayn. Loogu talagalay sofas -yada caadada u ah, uma fiicna sida soosaarka dufcadda caadiga ah…
Isla markaana heerka nololeed ee qaranka si weyn loo hagaajiyay, waxa kale oo ay shuruudo sare iyo sare ka dhigaysaa tayada hudheelka iyo adeegga. Sidaa darteed, marka la dooranayo alaabta hoteelka, huteelada waawayn waxay siiyaan fiiro gaar ah wax ku oolnimada, qurux, raaxada, faahfaahinta iyo dhinacyo kale, waxayna hordhigeen shuruudo ka sarreeya shirkadaha alaabta hoteelka. Iyada oo leh bilicsanaanta hal-abuurka leh iyo alaabta alaabta guriga oo heer sare ah,…
Waa maxay qaabka hurdo caafimaad qaba?
Habka hurdo caafimaad qabta ayaa xaqiijisa maalinta xigta oo ay ka buuxdo esp tamar ah dadka waaweyn ee shaqeeya iyo ardayda culeyska culus. Nadaafadda hurdada waa hawl caadi ah oo naga caawisa inaan seexano oo aan joogteynno hurdo caafimaad leh. Nadaafadda oo liidata ayaa caqabad ku noqon karta tayada hurdada. Sidaa darteed waxaa loo tixgeliyaa in dadka badankoodu aysan haysan hurdo caafimaad qabta waxaan rajeyneynaa in talooyinka yar ee hoose ay waxtar leeyihiin ka hor intaadan seexan.…